Qoryaha N GUUSHII |
Nooleeyaan maalmood la faano dadka ku Qoryaha n GUUSHII ciyaarta booska online mobile
Waxaa jira guutooyin aad u yar in si dhab ah u istaagaan kartaa calaamad iyo halyeeyga Qoryaha n GUUSHII laakiin xitaa markaas guutadii ayaa ku laayeen ah u gaar ah. Ha u headbanging biraha culus ama Gurtida dhagax weyn classic, guutadii hubiyo in helay garaac xaqa ay u leeyihiin in la sooro farcankii taageerayaasha dhagax weyn adag. In kastoo band ayaa kala heesta dhagax weyn ay weli sii wadaan inay noo iyahoo.
band ayaa bixisay ixtiraamka siyaabo badan. ha noqoto la bakeerigaagu coffee fudud ama a t-shirt, logo waxaa ka on taasoo ay sheegtay yahay gargaaraha in guutadii u dhigaya ka fog yahay. istuudiyaha NetEnt hubiyo in qaatay dunida ciyaaraha ah by lama filaan ah markii ay shaaca ka ciyaarta booska ka go'an in ay guutadii a. out of The fikrad sanduuqa ayaa si kastaba ha ahaatee fasax lacag leh taageerayaasha band iyo taageerayaasha booska dhab ah oo dhan qulqulaya galay casinos in ay isku dayaan in ay gacanta ku ciyaarta ka go'an in halyeeyada ah.
Calaamooyinka nostalgic iyo soundtracks
Baaxadda ay dadaal in kooxda NetEnt sudhaa dhismaha mishiinka Afyare this mudan tahay Xusuuso gaar ah. Tan iyo markii ay ciyaarta isticmaalaa kuwan raadkaygay asalka la koobigeyda oo ay leedahay guutadii, NetEnt lahaa si aad u hesho ogolaansho band ee loo isticmaalo on kulanka. Laakiin guutadii siiyey this iyo sidoo kale ogolaansho in la isticmaalo wax iyana waxay u maleeyeen loo baahan yahay iyo natiijada ka sii badan yihiin cad ka ciyaarta.
Iyadoo logo band iyo xiddigaha halyeeyga sida Axl Rose iyo xarriiq on the duntu iyo qaar ka mid ah guutadii ugu songs hit ciyaaro ee asalka ah. ciyaarta Afyare ayaa ka heli kartaa dhammaan taageerayaasha of guutadii nostalgic sida Qoryaha n GUUSHII ciyaarta Afyare waa mid ka mid ah amaanta ugu fiican in la siin karaa guutadii.
The Guns n Roses ciyaarta Afyare ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada cajiib ah in ay. Ciyaarta ayaa wilds, fidiyana oo loo laablaabi in la sameeyo tiirarka aad is laabtay weyn. Iyadoo wilds shaqeeyaan sidii dhammaan wilds caadiga samayn, fidiyana idin siiyo dhigeeysa xor ah oo dheeraad ah. fidiyana ee ciyaarta ma aha oo kaliya ayaa kuu abaalgudi la dhigeeysa free laakiin sidoo kale ku siin bonus multiplier a ku xiran tirada calaamado kala firdhiso aad ku dhuftey.
The Qoryaha n GUUSHII ciyaarta booska badan yahay in guutadii baad mudnaan badan. Iyada oo qaar ka mid ah muuqaallo kale u fiican iyo soundtracks in aad ka heli kartaa fekerayo koox iyo muuqaalada abaal in daafaca midig aad jiid karaa si dhab, ciyaarta Afyare run ahaantii waa mid ka mid ah ugu fiicnaa ka NetEnt.